डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा प्रकरणको करिब–करिब पटाक्षेप भएको छ। वरिष्ठ नेताको सूत्रलाई पार्टीको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा इन्चार्जहरूको बैठकले अनुमोदन गरेर समस्याको टालटुले समाधान निकालिएको छ।
बाबुरामले राजीनामाको एउटै गोलीले धेरै शिकार गरेका छन्। उनको गोलीले 'ठहरै' भए नारायणकाजी श्रेष्ठ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउने अनुहारको रूपमा रहेका बाबुरामलाई छाडेर प्रचण्डले काजी च्यापेर मात्रै हिँड्ने अवस्था थिएन। जनयुद्ध नलडी पदको स्वादमात्रै चाख्न आएको भन्दै बेलाबेलामा कार्यकर्ताबाट लोप्पा खाँदै आएका काजीलाई सबै अधिकार प्रचण्डमा केन्द्रित गर्ने कुराले भाउन्नै पारेको थियो। त्यसैले उनले चेलाचपेटाको भेलामा घोषणा गरे– 'ममाथि अन्याय गर्न खोजिँदै छ।' आफूले पद त्याग गरेपछि अरूले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने बाबुरामको तर्कले काजीलाई अझै ठूलो अप्ठेरोमा पारेको छ।
काजी र उनका चेलाचपेटाले राजीनामाका अस्त्र फ्याँकेका बाबुराम झनै शक्तिशाली बनेर पार्टीभित्र उदाउने देखेका छन्। दुवैलाई हैसियत बराबर नभए पनि प्रचण्डले समान दूरीमा राखेर आवश्यकताअनुसार बाबुराम र काजीविरुद्ध एकले अर्कोलाई प्रयोग गर्दै आएका थिए।
पार्टीभित्र पदका लागि सबैले दाबी गरिरहेको समयमा पद त्यागलाई महान्ता प्रदर्शन गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न बाबुरामा केही हदसम्म सफल पनि भएका छन्।
डिकेन्द्रको भूतले तर्साउला
पूर्वाञ्चलका डन भनेर चिनिने एमालेका भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपाल पूर्वाञ्चल संयोजक पर्शुराम बस्नेत धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। एमालेभित्र बहुदलीय 'डनवाद'का प्रणेताको रूपमा चिनिने कमरेड केपी ओलीदेखि युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महेश बस्नेतसम्म धरौटी जुटाउने काममा जोडतोडले लागेका थिए। बस्नेतलाई छुटाउन धरौटी जम्मा गर्ने भनेर युवा संघ नेपालले औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो।
दश दिनभित्रै छुटाउने योजना बनाएर सबै सेटिङ मिलाएर बालकोट दरबारले विशेष अदालतमा पर्शुरामलाई आत्मसमर्पण गराएको थियो। तर, धरौटी राखेको जेथाकै बारेमा समेत अदालतले स्रोत खोज्नसक्ने वकिलले सूचना दिएपछि त्यो कार्य पछि सरेको थियो। पर्शुराम करिब एक महिनामा छुटेपछि सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नभएको भए चार वर्षसम्म जेल पर्ने थिए भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। ओली निकटलाई सोध्ने हो भने पर्शुरामका लागि दुई करोड धरौटी जम्मा गर्ने कार्यलाई कार्यकर्ताको संरक्षणको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। महेश बस्नेतले नै धरौटी राख्ने जेथाको बन्दोबस्त गरेको एमाले वृत्तमा चर्चा छ।
पर्शुराम छुटेको टेलिजिभनमा समाचार सुनिरहेका एमालेका एक युवा नेताले भने अब भने चाहिँ डिकेन्द्र राजवंशीको भूतले बल्खुमा तर्साउने भविष्यवाणी गरे। 'हाम्रा नेताहरू गुन्डालाई छुटाउन ज्यान दिएर लागेका छन्,' ती भौतिकवादी नेताको प्रक्रिया थियो, 'यस्तै हुने हो भने बल्खुमा डिकेन्द्र राजवंशीको भूतले सताउनेछ।'
झापा विद्रोहमा केपी, सिपी र आरकेसँग लडेका राजवंशीले 'जीवन धान्न कठिन भयो, छोरालाई जागिर लगाइदेऊ' भन्ने अनुनय कसैले नसुनेपछि दुई वर्षअघि पार्टी कार्यालयका अघिल्तिर रहेको रूखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए।
चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्ने पुरानो उखान नेकपा एमाओवादीका नयाँ नेता रामचन्द्र झासँग मेल खान पुगेको छ। माओवादीमा ठूलै भाग खान एमाले छोडेर गएका झा यतिबेला रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा छन्। उनलाई पार्टीमा ठूलै भाग दिने कबुल गरेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले वास्तै गर्न छोडेपछि उनी झोलमा डुब्न पुगेका छन्। कबुल पूरा नगरेको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा नगएर घुर्की देखाए पनि प्रचण्डले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्। पार्टीको सचिव पद दिने ललिपप देखाएपछि एमालेबाट माओवादीमा हाम्फालेका झाले अहिले आफ्नो आत्मघाती निर्णयमा पछुताइरहेको बताइन्छ। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई फोन गरेर दुःख मनाउ गरेका झाको रोदन सुनेपछि खनालले जिस्काउँदै भने रे, 'आँशु पुछ्ने जालेरुमाल पठाउँ्क कमरेड?'
बग्यो उल्टो गंगा
नेपालका कुन नेता प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुने भनेर भारतले लबिङ गर्दै आएको समाचार हामीले बेलाबेलामा सुन्दै आएका हौँ । तर, यसपटक भने साह्रै अचम्मको कुरा देख्न पाइयो। नेपाली नेताहरूले यसपटक उल्टो गंगा बगाउने कोसिस गरेका छन्, भारतीय अधिकारीको पदावधि थप्नका लागि भारतीय पक्षसँग लबिङ गरेर। रञ्जित रे राजदूतमा नियुक्त भैसकेका छन्। उनको एग्रिमो पनि नयाँ दिल्ली पुगिसकेको छ। तर, नेपालका नेताहरू हालका भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको कार्यावधि थप्नका लागि जोडतोडले लागिपरेका छन्। भारत भ्रमणमा जाँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले मंसिरसम्म जयन्तलाई राजदूतको रूपमा राख्न आग्रह गरेका थिए। भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद नेपाल आएका समयमा समेत यसका लागि लबिङ भएको थियो। उनलाई भेट्न होटल द्वारिका पुगेका कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुखै फोरे, 'जयन्त अनुभवी छन्। यिनलाई संविधानसभाका निर्वाचन नहुन्जेलसम्म थमौती गरिपाउँ्क।' साउथ ब्लकको अन्तरंग थाहा पाउनेहरूलाई के थाहा छ भने प्रशासन गुटबन्दीग्रस्त छ। जयन्तलाई सथर्मन गर्ने गुट शक्तिशाली अवस्थामा छैन। त्यसैले जयन्तले उताबाट आफ्नो उपाय नलाग्ने भएपछि नेपालबाटै लबिङ गराएर समय थप गराउन लागेका हुन् भन्ने चर्चा छ। अहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयमा शिवशंकर मेनन गुटको बोलावाला हुँदा श्यामशरणहरू मन्त्रालयमा छायामा परेका छन्।
'सिन'मा आएका जोशी
कुनै बेला नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली नेता गोविन्दराज जोशी यतिबेला रिटायर्ड कर्मचारीजस्ता भएका छन्। शक्तिमा हुँदा गरेको चलखेल र भ्रष्टाचारका कारण उनी पार्टी राजनीतिबाट ओझेलमा परेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिका चल्तापुर्जा जोशी अहिले धेरैको स्मरणबाट हटिसकेका छन्। पार्टीको कुनै पनि भूमिकामा नरहेका उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धी तथा एउटै जिल्लाका रामचन्द्र पौडेल उपसभापति बनेपछि झन् विरक्तिएका छन्। जति गुमनाम भए पनि जोशी आफूलाई राजनीतिमा पुनःस्थापना गराउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। अघिल्लो साता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदलाई भेट्ने कांग्रेस नेताहरूको लाइनमा उनी पनि उभिएपछि अन्य नेताले चक्मा खाएका थिए।
खुर्सिदले कस–कसलाई भेट्ने तय साउथ ब्लकमै भएको थियो। नेपालस्थित भारतीय दूतावासको सहयोगमा साउथ ब्लकले तयार पारेको सूची लिएर नेपाल आएका खुर्सिदको औपचारिक लिस्टमा जोशीको नाम हुने कुरै भएन। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारी तथा सुजाता कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल र विमलेन्द्र निधि भेटघाट गर्ने सूचीमा थिए। निर्धारित समयमा भेटका लागि पुगेका नेताहरूले जब आफूभन्दा अगाडि लाइनमा जोशीलाई देखे, त्यसपछि सबै मुखामुख गर्न थाले।
कुरो के परेछ भने जोशीका छोरा, जो अमेरिकामा बस्छन्, सँग खुर्सिदको छोराको दोस्ती रहेछ। जोशीले छोरामार्फत खुर्सिदसँग भेटघाटका लागि आग्रह गरेका रहेछन्। जोशीको छोराले खुर्सिदको छोरालाई अनुरोध गरेपछि उनले जोशीसँग भेटघाट गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएका रहेछन्। खुर्सिद एयरपोर्टमा ओर्लिनेबित्तिकै दूतावासमा फोन गरेर जोशीको नाम भेटघाट गर्ने सूचीमा चढाउन भनेका थिए। दूतावासले उनी अहिले 'सिनमा' छैनन् भनेर टार्न खोजे पनि खुर्सिदले भेट्ने नै भनेपछि दूतावासका कर्मचारीले उनलाई कांग्रेसका अन्य नेताहरूसँगै भेटघाटका लागि समय मिलाइदिएका थिए।
‘मलाई पोखराले बनायो'
– सोनी राजभण्डारी, मिस नेपाल इन्टरनेसनल २०१४ जितपछिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ? बाहिरबाट हेर्दा जीवन नै उलटपुलट हुन्छ जस्तो लागे पनि त्यस्तो हुँदो रहेनछ। खुसी छु। मेरो मेहनतको कदर भएको छ। आफन्त, साथी...
प्रेमिकासँग छुट्टी मनाउँदै फेब्रिगास
चेल्सीका स्ट्राइकर सेज फेब्रिगास छुट्टी मनाउन प्रेमिका डेनियला सेमानसँग क्यारेबियन द्वीपमा पुगेका छन्। इंग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सी शीर्ष स्थानमा रहेका कारण प्रशिक्षक जोसे मोरिन्होले खेलाडीलाई छोटो–छोटो छुट्टी दिने गरेका छन्।
'जिन्दगीमा के चाहिँ गरिएन, हैट!'
उनले भन्ने 'हैट' अहिले 'सुपरहिट' छ। अभिनेता बुद्धि तामाङ अहिले फिल्म 'कबड्डी कबड्डी'को चर्चाको तापमा छन्। जीवनमा उनले धेरै दुःख गरेका छन्। इँटा पार्नेदेखि पत्रिका बेच्नेसम्म काम गरेका छन्। बदामदेखि...